China TUV 2PfG 1169 သန့်စင်သောကြေးနီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကေဘယ်ကြိုး 6mm 1000V စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ထင်း
TUV 2PfG 1169 Pure Copper Solar PV Cable 6mm 1000V သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel နှင့် Inverter သို့မဟုတ် Controller Box တို့ကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်တွင်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် UV ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးအလွန်ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းကောင်း၊ အိုဇုန်းတွင်လည်းကောင်း၊
အရွယ်အစား: 2x2.5mm, 2x4mm, 2x6mm, 2x10mm
TUV 2PfG 1169 Pure Copper Solar PV Cable 1000V2× 2.5mm, 2x4mm, 2x6mm, 2x10mm သည် photovoltaic power station အတွက် Double insulator တွင်ရှိသော electron-beam cross-linked cable များရှိသည်။
စပယ်ယာ: VDE0295 / IEC60228, Class5အရ Tinned ကြေးနီသည်
insulator တွင်လည်း: Polyolefin copolymer အီလက်ထရွန် - ရောင်ခြည် Cross-linkd (XLPE / XLPO)
အပြင်ဘက်အုတ်: Polyolefin coploymer အီလက်ထရွန် - ရောင်ခြည် Cross-linkd (XLPE / XLPO)
Sheath အရောင်: Black
၁။ အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများသည်မြင့်မားသောအပူချိန်၊ အပူ၊ အအေး၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်၊
၂။ ဤကေဘယ်ကြိုးများသည် photovoltaic (PV) panels များနှင့် panel များမှ inverter သို့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
3. သူတို့သည် DC ဗို့အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးထိတွေ့သောအခြေအနေများတွင်သက်တမ်းရှည်စေသည်။
1.Nominal voltage: U0 / U = 600 / 1000V AC၊ 1000 / 1800V DC
2.Test ဗို့အား: 6500V, 50HZ, 5min
3.Temperature အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: -45 ℃မှ + 125 ℃ -40 F အထိ + 257F အထိ
4. အပူချိန် ၂၅ နှစ် (TUV) - ၄၀ မှ + ၉၀ မှ -၄၀ F အထိ + ၁၉၄ ဒီဂရီအထိ
၅ ။ တိုတောင်းသော circuit ကိုအပူချိန်: 280 ℃, + 536 F ကို
၆။ ကွေးအချင်း ၀ က်: ပုံသေတပ်ဆင်ထားသော>4×Φရံဖန်ရံခါရွေ့လျား>5×Φ
ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ / စံချိန်စံညွှန်းများ
မီးဒဏ်ခံစွမ်းဆောင်ရည်: IEC 60332-1
မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှု: IEC 61034; EN 50268-2
အနိမ့်မီးဝန်: Din 51900
အတည်ပြုချက်: TUV 2PfG 1169 / 08.2007PV1-F
လျှောက်လွှာစံချိန်စံညွှန်းများ: UNE211 23; UNE 20.460-5-52, UTE C 32-502
1000V PV1-F Double Core Solar Cable ၏အရွယ်အစား
မီလီမီတာ2 nx မီလီမီတာ မီလီမီတာ မီလီမီတာ Ω / ကီလိုမီတာ V A
၂ × ၂.၅ 48 × 0,25 ၂.၀၂ 5,45 × 11,0 ၈.၂၁ 1000/1800 41
2 × ၄.၀ 56 × 0.3 ၂.၃၅ 6,10 × 12,3 ၅.၀၉ 1000/1800 55
2 × 6.0 84 × 0.3 ၃.၂၀ 7,20 × 14,5 ၃.၃၉ 1000/1800 70
2 × 10 142 × 0.3 ၄.၆၀ 9.00 × 18.1 ၁.၉၅ 1000/1800 98
ရှေ့သို့ COVID 19 ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး KN95 Earloop တွင်မျက်နှာဖုံးစွပ်သူများ
နောက်တစ်ခု: DC က 1500V 2core နေရောင်ခြည် Cable ကို 2x4mm 2x6mm
1000v နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကို
2 core ကိုနေရောင်ခြည် cable ကို
6mm DC နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကို
cable ကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကို 16mm2
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကို 2x4mm2
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကိုပေးသွင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုပရိသ
အမွှာ core ကိုနေရောင်ခြည် cable ကို
xlpe နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကို
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Soldering ဆဲလ်များအတွက် PV Tab ဝါယာကြိုးဘတ်စ်ကားဘား